Kooxda Liverpool oo eegeysa inay iska iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Naby Keita – Gool FM
(Liverpool) 25 Maarso 2019. Kooxda Liverpool ayaa la soo warinayaa inay ka baaraan-dagayso inay iska iibiso laacibkeeda khadka dhexe ee Naby Keita kaliya hal sano oo uu xirfaddiisa ciyaareed ku qaatay garoonka Anfield.
24-sano jirkaan ayaa adduun dhan 48 milyan oo gini naadiga Reds kaga soo biiray kooxda RB Leipzig xagaagii hore, waxaana uu u saftay kooxda reer England 26 kulan tartammada oo dhan.
Tababare Jurgen Klopp ayaan si dhab ah ugu guuleysan laacibkan khadka dhexe ee reer Guinea, yeelkeede warsidaha TeamTalk ayaa warinaya inuu macallinka reer Jarmal diyaar u yahay inuu lacag kaash ah siisto laacibkan.
Kooxda Liverpool ayaa diyaar u ah inay iska iibiyaan Keita haddii ay heli karaan bedelkiisa xilli ciyaareedka soo socda.
Labada kooxood ee ka dhisan dalka Jarmalka Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ayaa la warinayaa inay horay ula hadleen wakiillada ciyaaryahankan.